Xinhua Myanmar - ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် COVID-19 လူနာသစ် ၅၃ဦး တွေ့ရှိ ၊ စုစုပေါင်း အတည်ပြုလူနာ ၂,၁၉၅ ဦးထိ ရှိလာ
ဗီယက်နမ် လူနာသစ် ကိုဗစ်
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့တွင် အထက်တန်းစာမေးပွဲသွားရောက်ဖြေဆိုကြမည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ယာဉ်ထိန်းရဲများက သောက်ရေးပုလင်းများ ဝေငှပေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
ထိုသို့ လူနာသစ် ၅၃ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီအထိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ အတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း ၂,၁၉၅ ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၃၅ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သော ပြည်တွင်းကူးစက်မှုများအနက် ၄၇ ဦးမှာ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Hai Duong ပြည်နယ်မှ ဖြစ်ပြီး ယင်းပြည်နယ်သည် နိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အများဆုံးဖြစ်ပွားရာ နေရာဖြစ်ကြောင်း ၊ အခြား ပြည်တွင်းကူးစက်မှု ၂ ခုမှာ နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဟိုချီမင်းမြို့တော်မှ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိအချိန်ထိ ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်း၍ဆေးရုံးဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၁,၅၃၁ ဦးရှိကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့ပြီး အခြားလူပေါင်း ၁၂၉,၁၀၀ ဦးကို သီးခြားခွဲနေထိုင်းခြင်း(Q) နှင့် စောင့်ကြည့်ထားခြင်းများ အသီးသီး ပြုလုပ်ထားကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်က နောက်ဆုံးလှိုင်းရိုက်ခတ်မှုအဖြစ် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကူးစက်မှုတွင် လူပေါင်း ၆၀၄ ဦး COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့ကြီး နှင့် ပြည်နယ်ပေါင်း ၁၃ ခုတွင် ရောဂါကူးစက်မှု အတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိထားကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။ (Xinhua)
Vietnam reports 53 new COVID-19 cases, 2,195 in total
HANOI, Feb. 13 (Xinhua) -- Vietnam recorded 53 new cases of COVID-19 infection on Saturday, including four imported and 49 locally transmitted, according to its Ministry of Health.
The new infections brought the total confirmed cases in the country to 2,195 with 35 deaths as of6p.m. local time Saturday, said the ministry.
Among the domestically transmitted cases, 47 were detected in the northern Hai Duong province, the country's largest COVID-19 hotspot at the moment, and two in the southern Ho Chi Minh City.
The latest wave of COVID-19 infections hit Vietnam on Jan. 28, with 604 community cases so far confirmed in 13 cities and provinces, according to the ministry. Enditem
Traffic police provide water for candidates of the High School Graduation Exam in the Vietnamese capital city of Hanoi on Aug. 9, 2020.
Previous Article ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူကူရှီးမားတွင် အင်အားပြင်းငလျင်ကြောင့် ဒေသခံများ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့ရ
Next Article ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြင်းအား ၇.၃ အဆင့်ရှိ အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် လူပေါင်း ရာကျော် ဒဏ်ရာရရှိ